DAAWO-Axmed Madoobe oo ku soo laabtay Kismaayo kuna dhawaaqay in gobolka Gedo..
November 28, 2020 Xuseen 10
Madaxweynaha oo Warbaahinta kula hadley aqalka Madaxtooyada ayaa ugu horeyn ka tacsiyeeyey Dhalinyaradii xaley ay argagixisadu ku laayeen magaalada Muqdisho iyo AHU Marxuum Cabduullaahi Shigshigow oo kamid ahaa ganacsatada Jubbaland kaas oo ay maalmo ka hor argagixisadu ku dileen magaalada Kismaayo.
Tacsida kadib ayuu Madaxweynuhu si qoto dheer uga hadlay Xaaladda Siyaadadeed ee Dalka, Xaaladda gobolka Gedo iyo Cabashada Musharaxiinta Madaxtinimada dalka.
Madaxwene soo dhawoow, adiga iyo Ina Sayidba meesha nikii Sheekhaal baadba uga dhuumateen oo aad u cidleeyseene! Kkk
Alla maxaa daciif aduunka kunool kulahaa madaxweyne soo dhawoow ileen dad baa jecel in layska rarto
Gedo Land adaa diciif iyo dulliba ah kharaab yahow xun. Waa sax madaxweyne Axmed Islaam soo dhawoow mar labaad iyo mar saddaxaad aad baa laguu tebaye. Waa madaxweyneheena xalaashaa ka noxow nafta waa.
GEDO LAND, MA NINKA VILLA SOMALIA QUDHA XUKUMA OO AFRICAN KU ILAALIYO BAA HADDAA MADAXWEYNE AH, OO VILLADA DHINACNA U DHAAFI KARIN, OO WELIBA INANKA YAR EE SHEEKHAAL DUSHA KASII XUKUMO, OO ABIYA AXMED LEEYAHAY ERI WASIIRKA ARRIMAHA DIBADDA, ADEER NINKANI INTII ITAALKIISA WAA NIN XOR AH OO SOMALI AH, OO AAN QOFNA DABADA KA LEEFIN, ISAGA OO KHARASH IYO QATAR LACAGTEEDA WADAN
VIVA AHMED ISLAM, CIMRI DHEER
Hartii gafuurka dhuubneyd ee timaha Jareerka lahayd ee Yaxye Moorif caabudi jirtay ayaa daciif ah! Kkkk
A med Madoobe waxbo kama Qaadi kartide adoo idib leh ku daba feyl, illaa Mareexaankii wax ka Qaadi kari lahaana isaga ayaay taageersan yihiine,yaa af ka nool, Calool Uus! Kkkkk
Sixid. Habartii gafuurka dhuubneyd.
Axmed Kenyatta ma ahan Madaxweyne,cid uu masuuliyad u hayo, ma jidho,waa nin mudan in sharciga la horkeeno waayo cidna kama sarreyso sharciga ( No body above the law).
Tacsiyada Dadkii Xalay lagu Xasuuqay Caasimadda Soomaaliya garanay tacsideeda,laakiin Shegshegoow waxaa la diley Bil ka hor marka ma garan Tacsida hadda ah!!
Damcan waa mid micna kale ku jiro
Tacsiyaha Axmed Kenyatta, ma yihiin kuwa Xasuuqada Dhabta ah ka turjumaya ??
Waayo Waxa dadka Soomaaliyeed Xasuuqaya waa kooxda UGUS, islamarkaana kooxda UGUS waxaa madax u ahaa oo aasaasay waa Axmed Kenyatta iyo Sheikh Shariif, damcan meel kaga baxeen Fekerka laheynta ma maqal mana hayno taas
Si kastaba oo Dhurwaa midabbo kala duwan u yeesho>>>> Dhurwaa waa Dhurwaa!!
Dahir adaa diciif iyo dulliba ah kharaab yahow xun. Waa sax madaxweyne Axmed Islaam soo dhawoow mar labaad iyo mar saddaxaad aad baa laguu tebaye. Waa madaxweyneheena xalaashaa ka noxow nafta waa. Nacasnimada kala tega meeshaan dadkii lahaa baa ka taliya.
DAWLAD GOBOLEEDYADU WAXAY DIIDAYEEN UUN BAY AQBALEEND
♠ Dowladda gobolleed qaarkood, aan kuu magacyo dhabee Puntland iyo Jubbaland waxay diidanaayeen gudiga doorashooyinka qaranka GMDQ ee Xaliimo Yarey hogaamineesay, meesha waa laga saaray hayeeshe badalkeed waxay aqbaleen in guddi cusub oo doorashada qabta ay magacawdo dowladda federaalka hadaba maxay ku diideen guddigii Xaliimo yarey mar haday aqbalayaan midkale oo federaalka magacaabayo????
◼ Puntland iyo Jubbaland waxay doonayeen in caasimadaha dowlad gobboleedyada ay ka dhacaan doorashooyinka si aysan maamulisteeda ay ugu soo xushaan qofkay doonayaan taasi badalkeed waxay aqbaleen in doorashada lagu qabto maamul goboleed walba labba magaalo oo ka tirsan, halkaa uyara kaadi, Kismaayo hadii lagu qabto, magaalada kale waxay noqoneesaa Garbahaarey saa Bu’aale argagixisada ayaa heystee, codadka Garbahaarey ka iman doono waxay u sahansan yihiin Farmaajo.
◼ U gudub Galmudug hadii Sama-reeb ex Dhuusa-mareeb ay noqoto doorashada lagu qabto, magaalada labbaad waxay noqoneesaa Cabudwaaq hadee ogsoonow waa deegaanka uu ka soo jeedo Farmaajo! Halkaa soo wax kaagama bixin.
Labadii khaain soo ma xaqiiqsan warkaan hore u sheegay maanta,mana garwaaqsan guuldarada iyo in laga adkaaday.
Heshiiskii doorashada ee ay saxeexeen ayaa dib kala xumaaday!!!!
Halkay heshiiska kaga qoran tahay waxa Madoobe Ku doodayo ee ah xubnaha gobolka Gedo kasoo baxaya inuu isagu soon xulo,loona daayo inuu siduu doono ka yeelo???
Hadii Kismaanyo oo somaali ka dhexeyda,loo ogolaaday inuu siduu doono ka yeelo,mqxaa Gedo ka khuseeya?
Adeege Kenya iyo Deni maxaa markasta ay hal mar maamul beeleedyadooda uga dhoofaan,isku marna ugusoo laabtaan?!!!!
Waxa loosoo yeeriyay qorshayaalkii ay Ku dhaqaaqi lahaayeen,kagana soo hor jeesan lahaayeen qabsoomida doorashoyinka dalka.
Kkkkk War hooyooyinka lama caayo.
Reer Gedo anagaa ah Axmed madoobe waa warlord la mid ah Jees,Morgan,Hiiraale.
Kuwii ku qaraab jiray Marexan baan nahay ayaa nooga waramaya degaankeena.
Addeer reer Kililka iyo reer Bari raali ahaada.Minority edeb daran ayaa tihiin.